बोर्डर हीलर कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु - कुकुरहरु
बोर्डर हीलर कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु
बोर्डर कोली / अष्ट्रेलियाई गाई कुकुर मिश्रित जात कुकुरहरू
हार्ले बर्डर कोली / अस्ट्रेलियाई क्याटल डग मिक्स7महिनाको उमेरमा 'हार्ली एक सीमा कोली / अष्ट्रेलियाली गाई कुकुर हो। ऊसँग भएको सबै उर्जाको कारण ऊ खेतको वरिपरिको दिनभरि दगुर्छ। ऊ एक कार्यरत खेत कुकुर हुन प्रशिक्षण मा छ। ऊ दौडन र खेल्नको साथै घोडा र बाख्राको आवाज पनि मन पराउँदछ। उहाँ एक धेरै चलाख र वफादार कुकुर हुनुहुन्छ जसले सधैं मानिसहरूलाई हाँस्न बनाउनु हुन्छ। उसको प्रजननका लागि ऊ एकदम राम्रो सन्तुलित छ। उसले दुबै जातका गुणहरू देखाउँदछ। '
ऑसि बोर्डर हीलर
बोर्डर हीलर शुद्ध प्रजनन कुकुर होईन। यो बीचको क्रस हो सीमा कोली र अष्ट्रेलियाली गाई कुकुर । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरीरहेका छैनन् 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
er हप्तामा बक्सर कुकुर
मर्सिडीज बोर्डर कोली / नीलो हिलर मिक्स २ वर्षको उमेरमा 'मर्सिडीज एक सीमा कोली / निलो हिलर मिक्स हो। उनी धेरै राम्ररी व्यवहार गरिरहेकी छिन्। उनले कहिल्यै आक्रामक व्यवहार देखाइनन्। मेरो श्रीमान् र म उनको वरिपरि साथी बच्चाहरु थिए र उनी उनीहरुका बच्चाहरु हुन् उनीहरुलाई पालनपोषण गर्छन्। कान्छो बच्चा नवजात थियो। उनी सँधै साना बच्चाहरू द्वारा उछाल राख्ने सिट राखिन्। यदि आमा वा आफैंले बच्चा लिनुभयो भने, मर्सिडीज पछाडि पछाडि थिए। उनी हाम्रो २ का साथ अद्भुत छिन् बिरालाहरू (स्निकरडुडल्स र श्री स्मिटरहरू), साथै अन्य कुकुरहरु । उनको खेल साथीहरू समावेश छन् ... समी पिट बैल , मध्यरात The इटालियन मास्टिफ , तेल पिट बुल / बक्सर मिक्स ), Wookie the रेशमी टेरियर ), पेरिस चिपुडल , र अरु धेरै। उनी चतुर कुकुर हो जुन मैले देखेको छु। उनलाई टेनिस बल खेल्न मन पर्छ। बल समयमा उनी म भन्दा माथि उफ्रन्छन्। म ft फिट in इन् हुँ। उनी हावामा फ्लिप गर्छिन्, झाडिहरू र अवरोधहरूमा उफ्रिन्छिन्। उनी बास्केटबल, फ्रिस्बीज, फुटबल, केहि पनि मनपर्दछ जसलाई तपाईंले खेल्न अनुमति दिनुहुन्छ। हामीले उनको जुत्ताको जुत्ता मिलायौं कि त्यो वास्तविक छालामा चबाउन, उनीले उनीसँग months महिनाको उमेरदेखि पाइसकेका छन्, र त्यहाँ उनीहरूमा कुनै स्क्र्याच छैन। उनी हुनलाई वास्ता गर्दिनन् कुनै पनि कुराले हावी । म वास्तवमै उही व्यक्ति हुँ जसलाई उनी हुन चाहन्छिन् प्रमुख । उनीसँग वास्तवमा कुनै खराब बानी छैन यदि ऊ बाहिर छ र अर्को कुकुर पनि उनिबाट जान्छ ऊ धेरै उत्साहित हुन्छ र अर्को कुकुरसँग खेल्न चाहन्छ, र उनी निश्चित ध्यान दिन्छन् उनीहरूको ध्यान लिन। उनी उनको बटमा र पछाडिको खुट्टामा बस्छिन् मानव जस्तो र टिभी हेर्छ, र बिस्तरको लागि समय हुँदा आवरणहरू मुनि लुकाउँदछ। मेरो श्रीमान्‌ र मैले कडा परिश्रम गर्यौं उसलाई प्रशिक्षण । उनी बस्छिन्, हल्लाउछिन्, सुत्न, सुन्दर, र जम्प जान्छिन्। उनी अत्यन्त वफादार छिन् र मेरो सुरक्षा '
मर्सिडीज बोर्डर कोली / नीलो हिलर मिक्स २ बर्षको उमेरमा
२ वर्षको उमेरमा फ्रिकल बोर्डर कोली / अष्ट्रेलियाली गाई कुकुर मिक्स 'नमस्ते, यो मेरो प्यारो हो' फ्रेकल '। उहाँ एक अस्ट्रेलियाई गाई कुकुर (रेड हिलर) को साथमा सिमाना गर्ने कोली हुनुहुन्छ। ऊ एकदम कोमल स्वभावको छ, सबैलाई माया गर्छ। नमस्ते's को, हात मिलाउने, बोल्ने आदि हाम्रो समयको हिस्सा हुन्। उहाँ सधैँ बोल्नुहुन्छ, र हाम्रो विशेष बिरालाको लागि आफ्नै विशेष भाषा छ! उसले मलाई काममा लाग्नको कदर गर्दैन , विस्तारित धेरै भोकल 'बोल्ने बन्द' को साथ म घर पाउने बित्तिकै। मेरो जीवन मेरो छोरासँग अहिले सन्तोषजनक छ! बच्चाहरू हुर्किसकेका छन् र मेरो पार्टनरले धेरै काम गर्दछ त्यसैले ऊ मेरो लगातार साथी र सबै भन्दा राम्रो मित्र हो। मानिसहरूले मलाई उसको बारे मा सोध्न सडकमा रोक्छन् किनभने उसको यस्तो मायालु र असामान्य रंग छ। हामी दक्षिण अष्ट्रेलियाको आउटब्याक मरुभूमि क्षेत्रमा बस्छौं त्यसैले ऊ हाम्रो धेरै रातो फोहोरसँग मिल्छ!
फ्रिकल बोर्डर कोली / अष्ट्रेलियाली गाई कुकुर मिक्स २ बर्षको उमेरमा
बिक्रीको लागि poodle गोल्डन रट्रिभर मिक्स
फ्रिकल बॉर्डर कोली / अष्ट्रेलियाली गाई कुकुरको रूपमा पिल्लाको रूपमा
२ वर्ष पुरानोमा सेडी बर्डर कोली / अष्ट्रेलियाली गाई कुकुर मिश्रण 'सेडीले बोर्डर कोल्लीझैं स्लिम सुरु गरे, र त्यसपछि एउटा अस्ट्रेलियाई क्याटल डगको स्टकी बिल्डसँग मिल्दोजुल्दो भयो। साडी एक उत्कृष्ट प्रकोप छ। उनी सँधै खुसी र हाँस्दै खेलिन तयार छिन्। उनी अरूसँगै जान्छन् कुकुरहरु , बिरालाहरू र बच्चाहरू। उनी के गर्न चाहन्छन् यसका साथ खेल्ने साथी खोजिन्। '
सादी सीमा बोर्डि / अष्ट्रेलियाली क्याटल डग मिक्स २ बर्षको उमेरमा
कुकुरहरू जुन कम्तीमा पनि काट्छन्
एक पुराना कुकुरको रूपमा सादी सीमा बोर्डि / अष्ट्रेलियाली गाई कुकुरको मिश्रण
Al महिनाको उमेरमा कोल बोर्डर हिलर पिल्ला 'यो कोल हो। उहाँ4महिनाको पुरानो //4 निलो हिलर र १/4 बोर्डर कोली हुनुहुन्छ। उहाँ निकै मुठ्ठी हुनुहुन्छ, र आफ्ना ठूला दिदीबहिनी खेलौना चोर्न र तिनीहरूलाई लुकाउन र उनी भेट्टाउँदा कुश्ती गर्न मनपराउँनुहुन्छ। ऊ आफ्नी दिदी भन्दा कद्दलबग भन्दा बढी हो र आमा र बुबाको काखमा आफ्नो पेट खुवाउन मन पर्छ, धेरै नै ध्यान केन्द्रक हो! ऊ पनि धेरै छ आफ्नो आमा र बहिनी को सुरक्षा , र बाहिर कुकुरहरु वा अपरिचितहरुलाई बाहिर यार्ड मा अनुमति छैन। ऊ आफ्नी आमाको भतिजाहरूलाई पनि माया गर्छ, मलाई लाग्छ कि यो उसको जस्तो सानो छ। ऊ हिउँ खान पनि मनपराउँछ! (र त्यस कुराको लागि भुइँमा रहेको अरू केहि पनि)। '
डस्टि बोर्डर कोली / निलो हीलर मिक्स3बर्षको उमेरमा
हर्डिंग कुकुरहरूको सूची
सेन्ट बर्नार्ड प्रयोगशाला संग मिक्स
डेनिसिस फार्म कुकुर ब्रीडरहरू
कालो प्रयोगशाला मास्टिफ मिक्स पिल्पीहरू
अमेरिकी पिट बुल बक्सर मिक्स
चिहुआहुआ र न्यूनतम पिन मिक्स चित्रहरू
सुनहरी पुनःप्राप्ति बक्सर मिक्स पिल्ला